Taon-jobily: 30 taona ny Kerobima Ankatso | NewsMada
Taon-jobily: 30 taona ny Kerobima Ankatso
Notanterahina, ny asabotsy 14 sy omaly alahady 15 septambra 2019, ny fankalazana ny faha-30 taona ijoroan’ity antoko mpihira eo anivon’ny FLM na ny Fiangonana loterana malagasy ity. Ny antoko mpihira Kerobima izay eo anivon’ny sahan’ny FLM, ato anatin’ny synodam-paritany Antananarivo ary mirafitra ao amin’ny fileovan’Ankatso. Efa nisy ny fanombohana izao taom-pankalazana izao, ny volana jona lasa teo, mbola hisy koa ny famaranana ny taon-jobily, ny volana desambra ho avy izao, fa ity notanterahina omaly sy afakomaly ity kosa ny ivon’ny fankalazana. Teny faneva amin’izao fankalazana ny faha-30 ijoroan’ny antoko mpihira Kerobima izao ny ao amin’ny Salamo: 107.8a: “Aoka hidera an’i Jehovah ireo noho ny famindram-pony”. Nentina nanamarika izao fankalazana izao ny antsan-kira lehibe notarihin’ny antoko mpihira Kerobima, ny asabotsy teo. Fa ny omaly alahady kosa, tonga nanamarika ny taon-jobily ireo mpikambana rehetra, na ny ankehitriny na ny teo aloha. Teo koa ireo vahiny maro nasaina nanatrika ity fotoan-dehibe ity. Ary tsy hadinoina ireo raiamandreny rehetra am-panahy eo anivon’ny FLM, notarihin’ny solontena foiben’ny FLM, ny filoha teo aloha ny Fiangonana loterana malagasy, ireo raiamandreny pastora mpitondra fileovana sy mpitondra fitandremana eo anivon’ity fiangonana ity.
Toy ny fotoan-jobily rehetra, nisy ny fotoana nilazalazana ny tantara sy ny lalana nizoran’ity antoko mpihira ity, eo koa ny vinavinan’asa kasain’ireo eo anivon’ny komitin’ny fankalazana hotontosaina mba tsy handalo fotsiny izao hetsika izao. Nohiraina nandritra ny fotoana rehetra kosa ireo hira mampiavaka ity antoko mpihira ity ary nanatontosa izany ireo mpikambana taloha sy ankehitriny.
Mampiavaka ity antoko mpihira ity izy rafetin’ireo tanora rehetra avy amin’ny lafivalon’ny Nosy, indrindra ireo mandranto fianarana eny amin’ny anjerimanontolo.
Namaranana ny fotoana kosa ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo sy ny fiaraha-misakafo eo anivon’ny samy mpikambana, ireo maintimolaly, ireo vahiny manan-kaja ary ireo raiamandreny am-panahy. Tsy hadino rahateo ny fizarana mofomamy nentina namarana ny fotoana.
Jules Aimé A.